Zvekuita kana vaviri vacho vari kure | Bezzia
Zvekuita kana vaviri vacho vari kure
Maria Jose Roldan | 06/04/2021 22:13 | Hukama
Kuona kuti mumwe wako ari kure ndeimwe yekutya kweavo vanhu vari muhukama. Zvishoma nezvishoma kure kure kunokonzera kuti zvinhu zvisaite sepakutanga kwehukama, zvichikonzera kutya kuti ndiwo uchave iwo kumagumo.
Wakatarisana neizvi, munhu anobatanidzwa haazive zvekuita, kuyedza kuita kuti zvese zvidzokere kune zvakafanana nezvaimboita pakutanga. Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvinodikanwa kuti uwane chikonzero kana chikonzero nei rimwe remapati mukati mevaviri ava rave kure neremumwe.
1 Icho chisungo mukati mevaviri
2 Zvinokonzera kusawirirana mukati mevaviri ava
3 Maitiro ekuita kana mumwe wako ari kure
Icho chisungo mukati mevaviri
Kuti vaviri vasimbise uye vakure, zvakakosha kuti muite chisungo. Panofanirwa kuve nehumwe kuwirirana kana zvasvika pakupa uye kugamuchira. Kana izvi zvikasaitika, zvinokwanisika kuti chisungo chinodzikira zvishoma nezvishoma uye kutenderera kweimwe yemapato kunotanga. Kuti chisungo chisimbiswe, panofanirwa kuve nekugutsikana kubva kune vese mapato padanho remanzwiro uye nemanzwiro. Kana izvi zvikasaitika, zvakajairika kuti imwe yemitezo inosvikira kure uye hukama hwacho hunokoneswa.
Zvinokonzera kusawirirana mukati mevaviri ava
Pane zvikonzero zvinoverengeka nei munhu achigona kuenda kure nemumwe wake.
Munhu wacho atambura kurasikirwa nemumwe munhu akakosha uye ari pakati pekuchema. Tichifunga izvi, zvakajairika kuti maitiro emunhu achinje zvakanyanya uye inogona kuratidza chidimbu chevasungwa mune vaviri vacho. Kana izvi zvikaitika, zvakakosha kuti umupe rudo rwese rwunogoneka.
Iko kumanikidzwa kunogamuchirwa kungave nebasa, nemhuri kana nemumwe wako, Zvinogona kukonzera kumwe kure muhukama. Kana izvi zvikaitika, zvakakosha kutaura nevaroorani uye nekumisikidza nhungamiro dzese dzinogona kukunda kumanikidza kwakadai
Kurwa nguva dzese kunogona kupedza munhu uye sarudza kugara kure muhukama. Kukakavadzana nekurwa hazvina kunaka kune vaviri, saka zvinokurudzirwa kutaura nezvezvinhu uye nekugadzirisa mhinduro kwazviri.
Kutambura nekusatendeka Icho chimwe chezvikonzero zvakajairika zvekuti munhu anogona kupatsanurwa kubva kune waanodanana naye.
Maitiro ekuita kana mumwe wako ari kure
Kana chinokonzeresa chinokonzera kuregedza kwakadaro chazivikanwa, zvakakosha kuti uwane mhinduro kuitira kuti chinongedzo chisatsemuka:
Izvo zvakakosha kugara padhuze nevaviri uye mubvunze nenzira yakadzikama chikonzero chekudaro kwakadaro.
Kuva netsitsi nemumwe wako kunokubatsira kuziva manzwiro aunoita uye kukwanisa kugadzirisa dambudziko.
Haufanire kuwira mukudada uye iva kure nemumwe wako. Kana izvi zvikaitika, zvinhu zvichawedzera kushata uye zvichazonetsa kuti uwanezve chinongedzo.
Muchidimbu, kana mumwe wako ari kure, zvakakosha kuti uzive chikonzero chakakonzera mamiriro aya uye edza kuita kuti zvese zvidzokere munzira yazvanga zvakaita pakutanga. Chisungo chiri mukati mevaviri chakakosha uye kuchengetwa kunofanirwa kutorwa zvakanyanya sezvinobvira kudzivirira vaviri vacho pachavo kuti vasaparadzane.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Zvekuita kana vaviri vacho vari kure
Zvinhu zvishanu zvaunofanirwa kuita mazuva ese kuti uve noutano